सामाजिक संजालमा भाईरल भयो नायिकाले हस्तमैथुन गरेको भिडियो !! (भिडियो सहित) हेर्नुहोस - Daily Lokmandu
[ January 16, 2019 ] यो हो संसारकै ठुलो हिन्दु मन्दिर : माघ महिनामा सेयर गरेर अद्भुत लाभ लिनुहोस्	समाचार
[ January 16, 2019 ] चीनले चन्द्रमामा पठाएको कपासको बीउ टुसायो	समाचार
[ January 16, 2019 ] यो भिडियो हेरेपछि कसको आखामा आसु आउदैन होला (भिडियो सहित)	भिडियो
[ January 16, 2019 ] ३ पहाड फोडेर ३६ वर्ष लगाएर गाउँमा पानी ल्याउने यी व्यक्ति	समाचार
[ January 16, 2019 ] पुलमुनिको बास, छोराको यस्तो बेहाल डाको छोडेर घ्वाँक-घ्वाँक रोए ८० वर्षका तुईन तान्ने बुबा (भिडियो)	भिडियो
Homeसमाचारसामाजिक संजालमा भाईरल भयो नायिकाले हस्तमैथुन गरेको भिडियो !! (भिडियो सहित) हेर्नुहोस
June 27, 2018 समाचार Comments Off on सामाजिक संजालमा भाईरल भयो नायिकाले हस्तमैथुन गरेको भिडियो !! (भिडियो सहित) हेर्नुहोस
काठमाडौँ – हाम्रो समाजमा सेक्सको नाम लिने बित्तिकै सबैको बोली बन्द हुन्छ। किनकी यहाँ सेक्स एक यस्तो चीज हो जसको बारेमा कुरा गर्नु राम्रो मानिदैन्, अपाच्य हुन्छ र हामीले यौन शिक्षाको नाममा शायदै सिक्ने अवसर पाउँछौं। त्यस्तै सबैभन्दा बढी मुश्किल मानिन्छ महिलाहरुका यौन इच्छाका बारेमा कुरा गर्न। मानिसहरु महिलाका इच्छालाई खासै महत्व नदिएको समयमा बलिउडले भने यसबारेमा खुलेर कुरा गर्न उचित ठानेको छ। हामी मध्ये धेरै जसोले हेट स्टोरी र मस्ती जस्ता फिल्महरु हेरेका छौं र मन पनि पराएका छौं र त्यस्तै यस्ता धेरै फिल्महरु छन् जहाँ हामी सबैले महिलालाई मास्टरबेसन यानी हस्तमैथुन गरिरहेको देख्न सकिन्छ। यी फिल्महरुले केवल दुनियाँलाई महिलासँग सम्बन्धित सत्यता मात्र नबताएर महिलालाई पनि पुरुषहरु जति नै सेक्सको आवश्यकता पर्ने कुरा पुष्टि गरेको छ। आज हामी तपाईलाई बताउने छौं बलिउडका ती फिल्महरुका बारेमा जसमा महिला अभिनेत्रीले हस्तमैथुन गरे
• स्वरा भास्कर- वीरे दि वेडिंग
करीना कपूरको कमब्याक फिल्म वीरे दि वेडिंग मा स्वरा भास्करको कामको निकै चर्चा भयो। स्वराले यस फिल्ममा एक पियक्कड युवती साक्षीको भूमिका निभाएकी छिन्, जसको छोडपत्र हुने वाला छ। साक्षी आफ्नो पतिसँग खुशी थिईन र उनको पतिले उनलाई हस्तमैथुन गरेको देखेका थिए। जस पछि उनले साक्षीलाई ब्ल्याकमेल गर्न सुरु गरेका थिए। स्वराले आफ्नो यस सिनको कारण धेरै ट्रोलको सामना गर्नु परेको थियो तर महिलाका सेक्सुअल इच्छाको विषय बारेमा पनि चर्चा हुन् सुरु भएको थियो।
सलमान खानको रेस सँगै १५ जुनमा रिलिज भएको फिल्म लस्ट स्टोरिज मा पनि सेक्सको बारेमा कुरा गरिएको छ। नेटफ्लिक्समा रिलिज भएको यस शर्ट फिल्मको सिरिजमा करण जोहरद्वारा बनाईएको कायरा आडवाणी, विक्की कौशल र नेहा धूपिया स्टारर फिल्ममा पनि हस्तमैथुन सिन छ। यस फिल्ममा एक मात्र नभई दुई हस्तमैथुनको सिन रहेको छ। यस फिल्ममा तपाईले कायरा र नेहालाई हस्तमैथुन गरेको देख्न सक्नुहुन्छ।
• रत्ना पाठक शाह लिपस्टिक अन्डर माइ बुर्का
>बलिउड फिल्म लिपस्टिक अन्डर माइ बुर्काले आफ्नो रिलिज भन्दा पहिले नै निकै चर्चा र विवाद आफ्नो पोल्टामा पारेको थियो। यो फिल्म चार महिलाहरुका बारेमा छ, जो आफ्नो सेक्सुअलिटी एक्स्प्लोर गर्छन्। यस फिल्ममा अन्टीको भूमिकामा रत्ना पाठक शाहलाई हस्तमैथुन गरेको देखाईएको छ । अन्टीको यौन इच्छा पूरा नभए पछि उनले एक युवकसँग फोन सेक्स गर्न सुरु गर्छन्।
• कल्कि कोचलिन मार्गारिटा विथ अ स्ट्र
फिल्म मार्गारिटा विथ अ स्ट्र मा कल्किलाई हामी सबैले सेरिब्रल पल्सी यानी मस्तिष्क पक्षाघात जस्तो बिमारीसंग संघर्ष गरिरहेको देख्न सकिन्छ। यस फिल्ममा कल्किलाई पनि हस्तमैथुन गरेको देखाईएको थियो।
• इन्दिरा वर्मा कामसूत्र
नाम बाट नै प्रष्ट हुन्छ कि यो फिल्म सेक्स र त्यस सँग सम्बन्धित अलग-अलग कुराहरुका बारेमा हो। यस फिल्ममा महिलाहरुले आफ्नो सेक्सुअलिटीलाई अलग-अलग तरिकाबाट प्रयोग गरेको देखाईको छ। फिल्ममा माया जे चाहन्छिन्, त्यो उनले सेक्सुअलिटीबाट पाउँछिन् र हस्तमैथुन पनि गर्छिन्। यसको साथै उनी आफ्नो साथी तारालाई पनि हस्तमैथुन गर्न सिकाउँछिन्। त्यस पछि तारा पुरुषहरुलाई मैथुनको लागि प्रयोग गर्छिन् .।
यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् ७ दिनमा नै शरिरका मुसा कोठि गाएब गर्नुहोस् (भिडियो)
यो हो संसारकै ठुलो हिन्दु मन्दिर : माघ महिनामा सेयर गरेर अद्भुत लाभ लिनुहोस्
चीनले चन्द्रमामा पठाएको कपासको बीउ टुसायो
यो भिडियो हेरेपछि कसको आखामा आसु आउदैन होला (भिडियो सहित)
३ पहाड फोडेर ३६ वर्ष लगाएर गाउँमा पानी ल्याउने यी व्यक्ति
पुलमुनिको बास, छोराको यस्तो बेहाल डाको छोडेर घ्वाँक-घ्वाँक रोए ८० वर्षका तुईन तान्ने बुबा (भिडियो)
नागको अन्डा देख्ने मान्छे भाग्यमानी हुन्छ रे ! तपाई पनि यो भिडियो हेर्नुस अनि शेयर गर्नुस !! (1,191)
यो भिडियो हेरेपछि कसको आखामा आसु आउदैन होला (भिडियो सहित) (1,121)
पोखराका इञ्जिनियर सन्दीप गुरुङ विश्वमै प्रथम ! सम्मान स्वरूप लाइक, कमेन्ट र सेयर गरौं (1,097)
बुधबारको दिनमा श्रीकेदारनाथ मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७५ माघ २ गते बुधबारको… (1,053)
‘नेपालमै खनिखोस्री गरी खाउ, मलेसिया नआउ’…सक्दो शेयर गरौ (943)
२०७६ को पात्रो माघ १५ गतेभित्र बजारमा आउदै, बिदा बारे यस्तो छ निर्णय (581)
३३ काेटी देउताकाे दर्शन गरेर भेटी स्वरुप एक एक शेयर गर्दै बि.सं. २०७५ माघ महिनाको [मासिक… (544)
माघे संक्राती कै दिन भयानक दुर्घटना एक सशस्त्र प्रहरी सहित घटनास्थल मै ३ जनाको मृत्यु #RIP (529)
यी हुन नेपाल आयल निगमले पाएको अर्का कुलमान घिसिङ जस्तै महाप्रबन्धक : पहिलो दिन नै इन्धनको… (21,769)
सपनामा यी ५ चिज देख्नुभयो भने कसैलाइ नसुनाउनुहोस, मालामाल हुनु हुने छ(भिडियाे) (15,148)
बिराटनगरमा बिस्फोट,एक बालकको मृत्यु,एक बालिका गम्भिर (13,753)
OMG….दुखद : निर्मलाको परिवारमा द्धन्द , श्रीमानबाट कुटिईन् दुर्गादेवी…. पूरा… (13,453)
Wow…हात खुट्टा गुमाएका कृष्णको ‘राधा’ बनेर आईन रुकुमकी रुपा ! सबैलाइ प्रेरणा मिलोस… (13,045)
निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण ! निर्मलाको बुवा माथि शंका ! किन मान्दैनन् रगत दिन ? खास कारण… (10,478)
अब त तिमिलाई भेट्न पनि, अरु कसैको अनुमती चाहिन्छ मलाई…सबैले एकपटक… (9,816)
यी ४ रशिलाई जिवनभर कहिले मिल्न नसक्ने सफलता, ५ बर्ष पछी मिल्दै छ ! सबैले १ शेयर गरि जान्नुहोस ! (9,244)